Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guuldarradii ay xalay kala kulmeen Real Mallorca?? – Gool FM
(Madrid) 20 Okt 2019. Tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa diiday inuu cudur daar ka bixiyo guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay Real Mallorca, kulankoodii sagaalaad ee Horyaalka La Liga dalka Spain xilli ciyaareedkan.
Real Madrid ayaa guuldaro niyadjab leh kala soo kulantay kooxda Mallorca oo ay ku booqatay Estadi de Son Moix, kaddib markii loogu awood sheegtay 1-0, kulankooda 9-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain, taasoo sababtay in hogaanka horyaalka ay la wareegto kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona kaddib markii ay 3-0 ku garaaceen Eibar.
Haddaba Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ciyaarta kaddib wuxuu la hadlay saxaafada wuxuuna sheegay:
“Dhaawacyadu marmarsiiyo ma noqoneyso, waxaa jirta ciyaartooy aan dhaawac qabin, waxaan sidoo kale haysannaa ciyaartoy aad u wanaagsan”.
“Marka uu doorkooda yimaado, waa inay muujiyaan inay ku jiraan qaab ciyaareed ka dhigaya inay halkaan sii joogaan”.
“Dhibaatada ayaa ah inaan tusno seddexdii maalmoodba inaan fiicanahay, ma dhahayo waxaan ahay mid walwalsan maxaa yeelay ma jecli hadalka, laakiin hadii aan dooneyno inaan wax uun ku guuleysano xilli ciyaareedkan, waxaan u baahanahay inaan horey u sii socono”.